Published Date: Monday, December 26, 2016 | Source: NRNA UK
‘पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि नेपाल हाउस महत्वपूर्ण हुनेछ’
 मुछेत्र गुरुङ
मिलनसार र मृदुभाषी मुछेत्र गुरुङ सन् २०१५ मा एनआरएन युकेको अध्यक्षमा निर्वा्चित भएपछि ब्रिटेनमा नेपाललाई चिनाउने नेपाल हाउस बनाउन दत्तचित्त भएर लागिरहनु भएको छ। आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न लागेका गुरुङसंग हामीले उहाँको कार्यकालको अनुभवबारे सोधेका थियौं।
एनआरएन युके अहिले के गर्दैछ ?
त्यस्तो नयाँ काम केही गरेको छैन, समय तालिका अनुसार हामी नियमित काममा छौं । एनआरएन यूकेको मेगा प्रोजेक्ट नेपाल हाउस बनाउने काममा जुटेका छौं ।
कहाँ पुग्यो नेपाल हाउस बनाउने काम ?
चार वर्षे परियोजना हो, यसलाई दुई चरणमा हामीले अघि बढाएका छौं । पहिलो चरणमा हामी नेपाल हाउसका लागि जग्गा किन्छौं, त्यसपछि भवन निर्माणका लागि कोष जुटाउने योजना बनाउँदैछौं । यद्यपि अहिले पनि कोष संकलनको काम भइनै रहेका छन् । आउँदो जनवरी अन्त्यसम्ममा हाम्रो जग्गा किन्ने लक्ष्य छ, त्यसपछि यो परियोजनाले अझ गति लिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
मेगा प्रोजेक्ट भन्नुभयो, कति लगानीमा कस्तो बन्दैछ ?
दुई मिलियन पाउण्डको परियोजना हो । यसलाई नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्दा त्यस्तै २५–३० करोड रुपैयाँ हुन्छ होला । यो नेपाल हाउसमा विभिन्न जातजाति, ऐतिहासिक स्थानको चिनारी, नेपाल चिनाउने सगरमाथा, बुद्ध, “पशुपतिनाथ, लखन थापा, पारुहाङ(सुम्निमा, फाल्गुनन्द, श्रीजंघा लगायत धेरै कुरा यसमा अटाउने छन् ।
किन आवश्यक प(यो नेपाल हाउस ?
यो मैले मात्र शुरु गरेको परियोजना होइन, गैरआवासीय नेपाली संघ युके अध्यक्षमा सूर्य गुरुङ हुँदादेखि नै चर्चामा आएको हो । विभिन्न समयमा जेजस्तो काम भए पनि सन् २०१८ मा यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व निर्माण समितिलाई छ । रसियामा नेपाल हाउस बनेपछि बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले पनि त्यो परिकल्पना गरेका हुन् । अहिले बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खा परिवारसमेत झण्डै डेढ लाख नेपाली बसोबास गरिरहेको अनुमान छ। यीनै नेपालीका लागि मात्र होइन, पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न पनि नेपाल हाउस महत्वपूर्ण हुनेछ ।
फन्ड कहाँबाट जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
यहाँकै नेपालीबाट उठाउने हो । तर, हिजोआज च्यारिटी डिनरबाट आम मानिसहरु वाक्क भइसकेका छन् जस्तो लाग्छ । हामीले पहिलो चरणको काम अर्थात् जग्गा किन्ने काम सम्पन्न ग(यौं भने त्यसपछि यो परियोजनाले गति लिन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
तपाईंको कार्यकाल त सकिनै लाग्यो नि ?
हो थोरै समय बाँकी छ, म हुनु र नहुनुसँग परियोजनाले खासै सरोकार राख्दैन । किनभने परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि स्टियरिङ कमिटि छ, त्यो कमिटि मार्फत काम अगाडि बढ्ने हो ।
अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवार दिनु हुन्न ?
दिन्नँ, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म एनआरएनलाई समय दिएँ, अब त्यो मबाट सम्भव हुँदैन होला । सामाजिक काममा पैसा लगानी गर्नुभन्दा पनि समय दिनु महत्वपूर्ण जस्तो लाग्यो, मैले जति दिएँ, अब दिन सक्दिनँ ।
आफ्नो कार्यकालको कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
आफूले गरेको कामको मूल्यांकन आफै गर्ने होइन, अरु साथीहरुले गर्ने हो । यद्यपि साथीहरुबाट पनि अहिलेसम्म मेरो कामको सकारात्मक मूल्यांकन नै पाएको छु ।
बेलायतका नेपालीहरुको समस्या के पाउनुभयो ?
तत्काल यहाँका नेपालीमा मैले खासै समस्या देखिनँ । सबैको चिन्ता देश बनाउने मात्र पाएँ, त्यसका लागि अनुकूल वातावरण नभएको गुनासो साथीहरुबाट आउने गरेको छ । विभिन्न संघ संस्था खोलिएका छन्, कोही नेतृत्व लिन होडबाजी गर्छन्, कोही संस्थालाई अघि बढाउन लागेका छन् । सबैको आ–आफ्नो गुनासो होला, बाँकी सब ठीकठाक मैले पाएँ ।